Ukudala isaphetha se-satin ibhondi
Indlela yokwenza isaphetha sebhebhoni ye-satin
Ihlabathi leentlobokazi linemithwalo yonke yemfihlelo yayo, enye yayo yindlela yokwenza isaphetha sebhebhoni ye-satin. Kuba ezininzi iintambo, ithetha njengetayipu ehlangeneyo. Kodwa enyanisweni, ukhetho lokudala izindebe lunokuba lunzima kakhulu, luyinkimbinkimbi kwaye lunempumelelo. Ngendlela, izindebe aziyiyo yonke indlela yokulungisa iinwele, zidlala indima yento ebhenkisayo yokuhlobisa izinto ezahlukeneyo, kubandakanya izipho kubathandekayo.
I-satin ibhondi ye-Satin ibhondi ye-satin ehlanganiswe neenwele ze-Bowin
Isaphetha sobonke be-satin
Indlela yokwenza ibhanti yebhebhoni ye-satin
Sinikeza inketho yokwenza isaphetha sebhebhoni ye-satin, apho unokuyihobisa i-hoop yeenwele, ugqoke ibhande okanye isipho sokubambisa. Ukwenza oku, kufuneka sisebenzise ibhondi ye-satin, ububanzi obufanele bufike kwi-centimetri enye nesiqingatha. Kule teyipu senza amacandelo amane, siwunake ngobumnene. Icandelo ngalinye kufuneka libe liyingxenye yesithathu ngaphantsi kweyokugqibela. Ezi zintathu zala maqhekeza esizihlanganiselayo okanye zithungca kwi-ring and add them in a position that seam is in the middle. Emva koko, kufuneka sibeke iziqendu kwifom yepiramidi, kwaye siwagqithise ngecebo lesine.
Ubhedu beetronbhoni ezibhekiselwe kwiibhendi zeenwele
Ukwenza isaphetha esinjalo siya kuyidinga:
ububanzi beetape 2.5 cm (amaqhezu amathathu)
ububanzi beetape ye-1.5 cm kunye ne-0.5 cm (enye iqhekeza)
ukuxhamla kunye neenwele ezinwebileyo.
Ukubopha isaphetha kwi-satin ibhondi kwengubo
Ekuqaleni, kufuneka senze umgca wokuqala wesaphetha. Ngenxa yoko sithatha iziqwenga ezi-2 zeembane ze-satin ibhondi ezili-12 ubude nganye. Kwiimithunzi ezifanelekileyo, kwaye ziya kuhlanganisana ngokuphumelelayo kunye nomnye, umzekelo, 2 ezimhlophe kwi-ribbon encinci ye-peas kunye ne-3 ebomvu. Ngoku kufuneka siphule ibhondi ebomvu ngesiqingatha kwicala elincinci kwaye unqunyulwe ikona. Emva koko ungalibali ukutshisa nge-cut light, eyokuthintela ukutyhala nokwenza umgca ococekileyo. Inkqubo efanayo "yokunquma kunye ne-cauterization" yenziwe ngamacandelo amabini kunye nawo onke amanqanaba amane. Siqokelela 1 uluhlu lwesaphetha. Ephakathi kweyipelo yokuqala sifuna ukwenza i-fold, imibala eminye, kulo myalelo kufuneka siqokelele onke amateyipu. Ngoku siwafaka ngomtya kwaye sishiye amathiphu amade. Ezi ngcebiso ziya kufika ngokufanelekileyo xa siqala ukuqokelela isaphetha ngokwayo. Uluhlu lwethu lokuqala lukulungele. Ngoku siqhubeka nokudala okwesibini. Sithatha iisentimitha ezingama-40 ze-tape ezimhlophe, zinyathele kwisiqingatha kwaye wenze uphawu oluchanekileyo lwangaphakathi, ukusuka kwicala elingalunganga kwitheyipensi kunye nepensile. Sifaka itheyiphu kule myalelo, ukuze sifumane isibalo "sibhozo". Ukuze isaphetha sethu sibe nomumo olinganayo, ii-hinges zethu zifanele zibe zilinganiso ezifanayo.
Ukusebenzisa intambo emhlophe, bhoxa iteksi kwaye ngexesha elifanayo uhlalutye ixabiso lentsimbi yesaphetha, silungise. Isalathisi sesibini silungile!
Ukudala isalathisi sesithathu sesaphetha, kufuneka sinqumle amasentimitha angama-20 weetape, 1.5 cm ububanzi kwaye silungiselele iikona ngendlela efanayo nangaphambili.
Siyilungisa ngoncedo lomtya, sishiya amathiphu amade. Zonke iindawo ezi-3 zilungele!
Sidlula ekuqokeleleni isaphetha kwietrbhoni ze-satin. Sifanele sibambe iqhosha kunye no-1 kunye no-2, ukulungisa iziphelo ezide zomtya esasishiyile. Emva koko, sibamba isaphetha esincinci kwaye siyilungise kwakhona ngentambo. Ukusuka emgceni wesaphetha wenze i-knot kwaye usike umtya omfutshane. Ukuze isaphetha sibe nembonakalo enhle, sifihla yonke intambo. Cima iteksi elincinci elingu-5 cm, utshise iiphelo kwaye unamathele kwisaphetha.
Ngoku siquka ingcamango yethu kwaye siqhubekele kwisakhiwo somgca wethu. Ubuhla okanye intyatyambo encinci iya kuphumelela. Umgca wokugqibela ibhanti yerabha igxotshelwe emva kwesaphetha.
Sibopha isaphetha somsila, njengama-shoelaces alula. Ngeli nqanaba, ukudibanisa iqhina, akufanele ugcine iingcambu, kodwa ukufaka iminwe yakho kwiinqununu, eziza kukukhusela emanzini. Isaphetha esinjalo asikhuthazwa ukuba siqiniswe uze usasaze. Ngoku, kunye nenaliti kunye nentambo, yenza izicatshulwa ezimbalwa ngeqhina kwaye unqande iziphelo ezigqithisileyo. Yinqumle idibhoni ye-satin, uyijike ibe yincinci ende. Isiqingatha siphumelele iingcebiso uze udlule kwi-loop. Sidlula isaphetha size siqine, silungise ngeglue. Isaphetha sifanele isipho okanye isiqeshana seenwele.
Ukuphulukiswa kunye nemilingo ye-quartz yobumnyama
Iziphumo zokhuphiswano "Iifayile zikhangele"
Intombi kaMama, uMila Jovovich
Iigwele nge kiwi: 3 zokupheka eziphambili
I-WP Media - ukukhangisa kwevidiyo ngokufanelekileyo kubantu abaphulaphuli besifazane
U-Julia Proskuryakova osolwayo kwiveli kunye nomdlali omncinane